အိုဆာကာ တက္ကသိုလ် (大阪大学, Ōsaka daigaku?) သို့မဟုတ် ဟန်ဒိုင်း (阪大, Handai?) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာမြို့တွင် တည်ရှိသော အမျိုးသား တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုဆာကာခရိုင် ဆေးကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆဌမမြောက် သက်တမ်းအရှည်ဆုံး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ကာ ဂျပန်အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ၇ ခုထဲမှ တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သည်။ အိုဆာကာတက္ကသိုလ်တွင် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုရှင် ဟီဒီကီ ယုကာဝါကဲ့သို့ များလှစွာသော ကျော်ကြားလှသည့် သိပ္ပံပညာရှင်များစွာ အလုပ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။
QS World University Ranking အရ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် အကောင်းဆုံးသော အဆင်မြင့်ပညာရေး သင်ကြားနိုင်သော တက္ကသိုလ်(ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆၇) ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်စုံသော တက္ကသိုလ်စီမံချက် ပြီးမြောက်စေရေးအတွက် ပြန့်ကျဲနေသော မဟာဌာနကြီးများကို ဆုအီတနှင့် တိုယိုနာကာ ပရဝဏ်အတွင်းသို့ ပေါင်းစည်းရန် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် နာကာနိုရှီမ ပရဝဏ်အတွင်းရှိ အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံကို ဆုအီတ ပရဝဏ်အတွင်းသို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အိုဆာကာတက္ကသိုလ်နှင့် အိုဆာကာတက္ကသိုလ် နိုင်ငံခြားအရေး လေ့လာရေးကျောင်းတို့အား ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့် စီမံချက် ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံခြားရေး လေ့လာရေးကျောင်းနှင့် ပေါင်းစည်းမှုသည် အိုဆာကာတက္ကသိုလ်အား ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားအရေး လေ့လာရေးကျောင်းပါဝင်သော အမျိုးသားတက္ကသိုလ်နှစ်ခုမှ တစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ ထိုပြင် ထိုသို့ ပေါင်းစည်းမှုသည် တက္ကသိုလ်အား နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသော အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုဆာကာ_တက္ကသိုလ်&oldid=435722" မှ ရယူရန်
၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၄:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၄:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။